Biometrics Mustaqbalka sugida? | Laga soo bilaabo Linux
Biometrics Mustaqbalka sugida?
Maanta aqrinaya maqaal uu daabacay Mat Honan in banki cinwaankeedu yahay "Dila Erayga Sirta ah: Maxay Xarfaha Astaamaha Aanu Noo Difaaci Karin" (oo loo turjumay luuqadeena waa: "Dilka erayga sirta ah: Muxuu xarfo xarfaha u ilaalin karin mar dambe?"), Waxaan soo xasuustay sheeko maalmo ka hor lala yeeshay qaar ka mid ah xubnaha beeshan oo lagu xusay sida ay u yartahay baahinta. isticmaalka akhristayaasha faraha ayaa ah qaab xaqiijin ahaan, gaar ahaan aaladaha mobilada ee sida weyn loo isticmaalo iyo faa iidooyinka uu adeegkoodu bixin lahaa.
Maqaalka su'aashu wuxuu soo bandhigayaa tusaalooyinkii ugu dambeeyay ee sida akoonnada isticmaaleyaasha qaarkood (oo uu ku jiro qoraaga maqaalka) la jabsaday, taasoo muujineysa awood la'aanta dhabta ah ee furaha sirta ah iyo habab xaqiijin iyo xaqiijin hadda ah si loo ilaaliyo macluumaadka iyo asturnaanta. Wuxuuna ku doodayaa sababaha bayaankan, dhammaantood waa kuwo ansax ah waxaana lagu soo koobi karaa afar koox oo waaweyn:
1.- Kordhinta awooda wax qabad ee u oggolaanaysa jabsashada ereyga adoo adeegsanaya xoog caayaan iyo qaamuusyada sirta ah ee laga helo shabakadda. Kaalay, adoo wata awoodda CPU-yada hadda jira iyo GPU-yada, adoo adeegsanaya barnaamijyo jabsi ballaadhan oo xoog leh, oo wata qaamuusyo aan si fudud ugala soo bixi karno shabakadda, waa waqti uun in qof uu maareeyo inuu helo lambarka sirta ah ee faylka la duubay. , xitaa markii loo maleeyo inay "ammaan tahay" maxaa yeelay waxay ka kooban tahay xarfo, lambarro iyo astaamo kale, iyada oo ay sii xumeyneyso in awoodahan ay sii wadi doonaan inay sii kordhaan mustaqbalka.
2.- Isticmaalka ereyada sirta ah isla isticmaalaha. Maxaan waligeen qabanay? Waxaan u isticmaalnaa isla koontada emayl si aan ugu xaqiijino nafsadeena adeegyada kala duwan, xitaa, waxaan isticmaalnaa isla magaca iyo isgarad isku mid ah markii aan iska diiwaan galino meelo kala duwan oo shabakada ah, marka lagu daro "silsilada" akoonkeena isla cinwaanka emailka "keyd" in haddii qof uu marin u helo mid ka mid ah koontooyinkeenna, waxay ficil ahaan u helaan dhammaantood.
3.- Adeegsiga kalluumeysiga iyo malware-ga si loo xado sirta. Halkan, waxa ugu badan ee saameeya caqliga guud ee isticmaalaha, maxaa yeelay haddii aad inta badan gujiso xiriirinta inta waraaq ee aad heleyso ama inta bog ee aad booqato, waxaa lagaa qaadayaa inaad gudbiso macluumaadka naftaada oo hadhow loo adeegsan doono adiga.
4.- Isticmaalka "injineernimada bulshada". Halkan waxaa ku yaal laba dhinac oo si ballaaran loo adeegsado. Dhinaca kale, inbadan iyo ka badanba waxaan nolosheena saareynaa shabakadaha: Facebook, Linkedin, baloogyo shaqsiyeed, iwm. U diyaari qof walba, faahfaahinta faahfaahsan ee nolosheena (halka aan wax ku baranno, yaa saaxiibbadeen ah, magaca xayawaankeenna, iwm, iwm.), Kuwaasoo inta badan jawaabaha u ah su'aalaha xaqiijinta ee ku dhowaad dhammaan adeegyada ku jira kaas oo aan diiwaangelino. Dhinaca kale, awoodda haakarisku inay u adeegsadaan aaladaha injineernimada bulshada si ay ula falgalaan adeegyada macaamiisha, waxay u oggolaaneysaa iyaga inay si fudud ugu fududaato, iyagoo ka faa'iideysanaya macluumaadka ay naga hayaan, si looga dhaadhiciyo adeegyadan inay yihiin isticmaale run ah oo ay helaan hayn xisaabaadkayaga.
Hagaag, horumarka bulshada warfaafinta, waa xaqiiqo aan la inkiri karin in joogitaankeena internetka uu sii kori doono, halka aan ku xirnaan doonno heer aad u badan adeegsiga adeegyada internetka ee nolol maalmeedkeena, taas oo kudartay ujeedka in loo rogo taleefannada gacanta jeebka elektarooniga ah ee lacag bixinta, iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyada NFC (Near Field Communication), waa walxaha duufaan kaamil ah xagga amniga, aan macquul aheyn in laga fogaado isticmaalka kaliya ee ereyada sirta ah iyo qaababka xaqiijinta sida kuwa hadda jira .
Sida dhammaan arrimaha ay khuseyso amniga, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo tanaasul u dhexeeya xoogga habka xaqiijinta iyo sahlanaanta isticmaalka iyo asturnaanta adeegga su'aasha laga qabo. Nasiib darrose, illaa hadda, fududaanta adeegsiga ayaa ka adkaatay xoogga farsamooyinka aqoonsiga.
Waxay umuuqataa inay kadis tahay aragtida ah in xalka dhibaatadan ay kujirto iskudhaf furayaasha sirta ah, falanqaynta qaababka adeegsiga iyo adeegsiga aaladaha biometric-ka si loo damaanad qaado geedi socodka xaqiijinta ee nolosha u fududeynaya isticmaaleyaasha, iyadoo la adeegsanayo habab xaqiijin badan. kuwa hadda jira.
Horeba qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegga ee shabakadda waxay bilaabeen inay adeegsadaan qaabab adeeg ah oo lagu kabaayo furaha sirta ah, taasi waa sababta, tusaale ahaan, markaan ka soo galno koontadayada 'Gmail' IP-ka oo aan ahayn kan aan caadiyan qabanno, wuxuu noo dirayaa shaashadda xaqiijinta si loo xaqiijiyo qaab kale (wicitaan taleefan ama fariin qoraal ah), in aan nahay isticmaale sharci ah koontada. Marka la eego dhinacan, waxay umuuqataa in la isku raacsan yahay inay waqti uun kali tahay in inta badan bixiyeyaasha adeegga ee shabakada ay qaataan noocyo isku mid ah.
Waxa wali maqan ayaa ah in adeegsiga farsamooyinka biometric-ka ama aaladaha oo qayb ka ah xaqiijinta aan la bilaabin in la hirgaliyo, waxaa jira qaabab kala duwan, laga soo bilaabo midka ugu fudud sida aqoonsiga qaabka codka ama aqoonsiga wajiga (oo ay si buuxda u fulin karto softiweerka) aaladaha horeyba waxay u heystaan ​​qalabka loo baahan yahay (makarafoonada iyo kaamerooyinka), xitaa kuwa ugu adag sida akhristayaasha faraha ama qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanners'.
In kasta oo talaabooyinka qaarkood durba la qaaday arintan, sida aqoonsiga wajiga si loo furo mobilada qaar ka mid ah telefoonada Android ama iibsigii dhowaan ay iibsatay Apple ee shirkadda AuthenTec, oo ku takhasusay arrimahan, isticmaalkeedu ma dhaafo sheekada iyo Waa maxay walwal badan ayaa ah in isku-darka qaababkan xaqiijinta adeegyada shabakadda aan weli la bilaabin in laga wada hadlo.
Fikradayda, aqoonsiga wajiga ama codka, inkasta oo ay yihiin kuwa ugu fudud ee la hirgelin karo oo aan u baahnayn qalab dheeri ah, ayaa ah hababka ugu amniga yar, halka qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'iris scanners' gebi ahaanba aan macquul aheyn in lagu dhex daro aaladaha mobilada, taas oo Xulashada ugu fiican ay tahay akhristayaasha faraha. cabirkooda oo yaraaday iyo badnaanta "furayaasha" ayaa noqon lahaa xalka saxda ah; Aan sharaxaad ka bixiyo: hadii hargabku nagu holaday ama shil nagu dhacay ama aan wajiga dhaawac ka soo gaarnay, codka ama aqoonsiga wajiga ayaa dhib noqon lahaa, halka akhristaha faraha, aan u qaabeyn karno isticmaalka dhowr farood, marka a shilka mid ka mid ah nagama hor istaagi doono helitaanka xogteena iyo adeegyadeena.
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira qaar ka mid ah buugaagta xusuusta oo isku daraya akhristayaasha faraha faraha qaabkooda, iyada oo aan la arkin kororka qiimaha badan ee moodelladan, taas oo noo oggolaaneysa in aan qiyaasno in kharashkoodu uusan muhiim ahayn, in kasta oo xaqiiqda ah in isticmaalkooda aan la kordhin. Dhanka kale, nasiib darro xilligan waxaa jira aalado aad u yar oo moobiillo ah oo leh akhristayaal faro iyo is-dhexgalkooda ku jira uma muuqdo mid isbeddel ku socda.
Fikradaha qaarkood waxay soo jeedinayaan inaan wajaheyno xaalada digaaga iyo ukunta caadiga ah: Akhristayaasha kuma dhexjiraan aaladaha maxaa yeelay adeegyada shabakada uma adeegsadaan qaab xaqiijin, laakiin taa bedelkeeda, adeegyada shabakada uma adeegsadaan sidii farsamo ahaan loo aqoonsan karo tiro yar oo qalab ah oo iyagu isku dhafan sida caadiga ah. Tani waxay u muuqataa inay tahay gunti Gordian ah oo aan cidina ku dhicin inay gooyso xilligan.
Marka laga gudbo maraankan aan isku aragno, waxaan u maleynayaa inay jirto xaalad lagu xallin karo fulinteeda waana taas in la dejiyo heerarka lagama maarmaanka u ah isticmaalka faraha faraha ee xaqiijinta, taas oo ah, akhristaha sawirka faraha ayaa baaraya sawir waa, nooc ka mid ah saxiixa elektaroonigga ah waa in la soo saaraa, kaas oo ah midka loo diri doono adeegga "eray sir ah" si loo xaqiijiyo, sidaas darteed algorithm-ka soo saarista saxiixaas waa inuu damaanad-qaadaa in akhristayaasha kala duwan ay soo saaraan saxiixyo isku mid ah oo isla raad ah, iyada oo aan waxyeello u geysaneynin amniga taasna uma muuqato wax fudud.
Haa, waan ogahay in waqtigan qaar soo bandhigi doonaan wixii ay ku arkeen filim halkaas oo iyagoo kor u qaadaya faro ka hadhay muraayad ay ku maareeyaan inay u adeegsadaan si ay ugu helaan rakibida, laakiin tan, wixii ka baxsan cajiibka ee natiijada shaashadda, sameeya ma ahan waxaan u maleynayaa inay noqotay moodo ay tahay inaan mustaqbalka ku dadaalno; Ilaa midkeen naga mid ahaado Agent 007 ama uu leeyahay lambarro lagu galo Fort Knox.
Maaddaama qoraaga maqaalka soo ifbaxaya qoraalkan uu leeyahay, tallaabada ugu horreysa ee xallinta dhibaatada waa aqoonsiga jiritaankeeda si markaas uu awood ugu yeesho inuu bilaabo soo-jeedinta xallinta waana taas sida saxda ah waxa ay ku saabsan tahay. Waxaan kula talinayaa dhammaan inta akhrin karta maqaalka aan tixraacayo, maxaa yeelay waa mid aad u sharrax badan, sidoo kalena ku raaxeysaneysa wax aqrinta (taas oo nasiib-darro kuwa aan aqoon Ingiriisiga aysan ku raaxeysan doonin), iyadoo dhiirrigelin dheeri ah ay ku jirto luul qaar ka mid ah sida Hackers-ku waxay khiyaaneeyeen adeegyo "sumcad leh" si ay marin ugu helaan.
Miyaad igu raacsan tahay ra'yigayga mise adigu waxaad ka mid tahay kuwa weli aaminsan in furaha sirta ahi nagu filan yihiin
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Biometrics Mustaqbalka sugida?
Maqaalka weyn iyo sida aad u aragto 100%. Ka isticmaale ahaan waxaan sameynaa khaladaad badan marka la eego arrimaha amniga tanina waxay noqoneysaa hab fiican oo waxoogaa amaan ah lagu noqon karo.
Waxyaabaha fucking ayaa ah inay farta kaa jeexayaan ama luminayaan fartaada xDDD
Fiiri, adigoon helin wax naxdin leh, wax walba xal baa loo helayaa, waxaa jira 2 dariiqo oo "lagu akhriyo" faro: midka ugu fudud ayaa ah in la abuuro sawir muuqaal ah, habkaas ayaa ah midka ugu fudud uguna fudud ee lagu khiyaanayn karo, dhab ahaantii, waxaad si fudud faraha Waxaad ku koobiyeynaysaa adiga oo sawirka ku soo dhaweynaya, waxaad ku dul wareegeysaa sawirka calaamadaha fiditaanka oo leh calaamadeeye, mar labaad waad koobiyeynaysaa, adigoo yareynaya cabbirka hore iyo voila ... adigu waad ku khiyaanayn kartaa akhristaha; laakiin waxaa jira dariiq kale oo badbaado leh, waa akhriste sawir ka soosaaraya iskaanka faraqa u dhexeeya awoodaha iyo dooxooyinka raadadka, si markaa, haddii farta loo jaro, aysan jirin si ay u shaqeyn karto.
Dhinaca kale, waxaa la ogaaday in faraha faraha ay dib u soo cusboonaadaan waqti ka dib, xitaa haddii maqaar lagu tallaalay faraha. Intaa waxaa sii dheer, intaa dheer, marka aad habeynayso akhristayaasha faraha, waxay ku siinayaan suurtogalnimada inaad kula gasho faraha in ka badan hal far, sidaa darteed waad isticmaali kartaa, tusaale ahaan, tusmadaha gacan kasta oo haddii mid kaa lumo, waxaad leedahay kale.
Lagu farxay? 😉
xDDD Haa ninyahow, dabcan waa ku faraxsanahay 😀
Waxaan xasuustay wixii Richard Stallman ku yidhi booqashadiisii ​​ugu dambaysay ee Argentina (ka hor inta aan la xadin laptop-kiisa):
“Kadib waxaan si naxdin leh ku helay warka SIBIOS System, kaas oo ay ku dalbanayaan faraha dhammaan dadka soo galaya dalka. Markuu arkay warkaas, wuxuu u maleynayay inuusan waligiis ku laaban doonin Argentina. Waxaa jira cadaalad darro ay tahay inaan iska caabinno xitaa haddii ay ku kacdo. Faraha ma siinayo; iyaga kaliya xoog ayey kula soo bixi karaan. Haddii waddan iyaga ka dalbado, anigu tegi maayo. "
Sikastaba Stallman wuxuu qirtay inuusan isticmaalin taleefannada casriga ah, uusan internet-ka marin, inta aan ogahayna, macaamilkiisa wuxuu ku socdaa oo keliya lacag caddaan ah, sidaa darteed isagu uma baahna mid ka mid ah taas, xitaa sidaas oo ay tahay, kama hortegi karo Big Brother Daawashadiisa, laakiin waxaan kuu soo jeedin karnaa inaad u guurto dalkeyga iyo dhibaatada internetka, ciwaanada boostada, bangiyada internetka, iwm, iwm, waxa xun ayaa ah inaad dareemi doonto waxoogaa caajis ah ...…
Ninkani waa inuu bilaabaa inuu wax yar ka arko cadaalad darada ka jirta dalkiisa, iyo gaar ahaan cadaalad darada dalkani ka geysto meelo kale, oo aad uga fog weydiisashadaada faraha ...
Tani waa wax la yaab leh, maxaa yeelay waqti ka hor ayaan ku akhriyay maqaal (ma xasuusto majaladda) in xaqiijinta biometric horeyba loogu sifeeyay inay tahay tikniyoolajiyad loo maro joojinta.
Sababta ay ugu dhowdahay inaysan jirin nooc ka mid ah laptop-yada ay ku jiraan akhristaha faraha
Ku jawaab rafuru
Maqaal aad u fiican ... ... dhowr jeer waxaan ku fikiray inkasta oo aan ku arkay akhristayaasha faraha faraha dhowr nooc oo buugaag qoris ah ... ... moodooyinka cusub ma keenaan, tani macnaheedu maahan la'aanta isticmaalka tan qalab in xaqiiqdii ay ka badan tahay xiiso? ..
Marka lagu daro hirgelinta lagama maarmaanka u ah nidaamyadan iyada oo ah tallaabo nabadgelyo oo loogu talagalay adeegyada kale ee shabakadda.
Aad u xiiso badan .. waad ku mahadsantahay wadaagista ..
Ku jawaab Scalibur
Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso maqaalka Waired ee tan keena, maxaa yeelay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fiican u fahamto waxa la soo jeediyay.
Waan ka warqabaa sida yar ee ay u faafisay isticmaalka akhristayaasha faraha, laakiin ma aanan arag wax ka mid ah inay tahay teknoolojiyad geedi socodka lagu joojinayo, in kasta oo meel laga sheegay, haddana ma noqonayso markii ugu horreysay ee ay tahay loo baahan yahay in "dib loo soo nooleeyo" Qof dhintay si uu uga jawaabo caqabad.
Waxa aan isku dayayo inaan ku sharaxo qodobkaan ayaa ah, asal ahaan, qaabab cusub oo amaan ah oo xaqiijin ah ayaa loo baahan yahay, iyo inta aan ka arki karo, ma jiro tiknoolajiyad kale oo suuragal ah in loo isticmaalo aaladaha biometric-ka, waana taas si sax ah waxa ay ku saabsan tahay.
Waxay u egtahay fikrad xiiso leh aniga. Telefoonada casriga ah waa inay raadsadaan hab ay ugu dhexgalaan shaashadaha, iyo dabcan, inaysan isticmaalin wax badan oo batari ah.
Qalabka lagu baarayo faraha Uma maleynayo inay suurtagal tahay in lagu dhex daro shaashadda moobiilka, haddii aad eegto sawirka sharraxaya maqaalkan, waxaad arki doontaa inuu qaadanayo meel aad u yar oo waxaan u maleynayaa inay fududaan laheyd meel ka hel guryaha, Xaqiiqdii, waxaa horeyba u jiray moodello qaarkood oo leh, sida Fujitsu Tegra 3.
Dareen fiican ima siinayso. Diiwaanka Dadweynaha Qaranka (haa, halkan Mexicalpan de las Tunas; oo aan weli si ballaaran loo hirgelin) ujeeddadeedu waa in la isticmaalo oo keliya faraha, laakiin sidoo kale iriska. Khalad ka jiray keydinta xogtan xaalad markii dhamaantood lagu furo faraha ayaa mashruucan ka dhigi doonta mid aad khatar u ah.
Waad beddeli kartaa eraygaaga sirta ah markasta oo aad rabto, laakiin sawirka faraha ma beddeli karo. Taasi waa sababta aan wax yar uga baqay tan.
Nasiib darrose, Walaalkaas Weyn ee ay dawladuhu ka jiraan, cidina nama badbaadinayso, maxaa yeelay iyaga ayaa ugu filan inay sharci ku caddeeyaan in diiwaangelinta farahayagu ay muhiim u yihiin soo saarista dukumintiga aqoonsiga (DNI, baasaboor ama wixii ay ugu yeeraan meel kasta) ) intaasna waxay naga leeyihiin dhamaanteen si wanaagsan oo isku xidhan. Ku dar intaas si ay u helaan dukumiintiyadan aqoonsiga, waxay qaadayaan sawir (ama waa inaad mid bixisaa), taas oo ay la socoto barnaamijka aqoonsiga wajiga ee ay haystaan, u oggolaanaya inay na kormeeraan markasta oo ay doonaan. Haddii fikradda ah in wax loo yaqaan asturnaanta ay wali jirto, fadlan isla markiiba iska tuur maxaa yeelay waa uun chimera.
Aad baan u diidanahay. Xaqiiqada ah inay naga duudsiyeen arimaheena gaarka ah micnaheedu maahan inaan noqono kuwa iyaga gacan siiya. Waxaan u maleynayaa in mustaqbalka qaababkani ay kala jajabin doonaan dadka, waxaan ugu yaraan diidayaa in aanan u sii wadin u dagaalankeeda si la mid ah sidii aan u diidey sanado badan ee aanan ugu dagaallamin barnaamijka bilaashka ah.
Taasi waa sababta ereyga "Software-ka Bilaashka ahi" uu aad uga weyn yahay si fudud "il furan" (in kasta oo ay si dhaqan ahaan ah ugu dhaqmayaan si aad u eg) tan iyo inta ay SL u taagan tahay falsafadda iyo aragtida bulsheed ee ay dhaqdhaqaaqa furan u tilmaamayso oo keliya wuxuu wax ka qabtaa dhinaca farsamada ee horumarinta barnaamijka, mid waa dhaqdhaqaaq bulsho iyo dhaqan, kan kalena makaanik horumarineed - Software Bilaash ah, qeexitaan ahaan, wuxuu ka kooban yahay il furan.
Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee aan ugu haajiray SL waqti hore, aniga kaliya igama dhaadhicin farsamada heerka sare ee Linux kernel ee Unix ay dhiirigelisay laakiin sidoo kale balanqaadka Xoriyada ee FSF ay difaacdo.
Waan jeclahay sawirkan, markii aan ku arkay RevolutionOS isla markiiba waxaan qaatay shaashadda: http://i.imgur.com/A1r0c.png
Qoraaga maqaalkaas waa fadeexad naftiisa u dhiibatay Apple, waxaan aqriyay akoonkiisa sida akoonkiisa "loo jabsaday" runtuna waxay tahay inay ahayd qalad xaasidnimo ah oo uu sameeyay Apple.
(Sideedaba, sida ay dhibsatay in ereyga "hack" loo adeegsado si fudud oo wax walba, qofna ma yaqaan wax nacalad ah wayna hadlaan maxaa yeelay dhegta ayey ku ciyaaraan. Waxa ku dhacay eeygaas kulul wax shaqo ah kuma laha " jabsiga. ")
Intee in le'eg oo dibi dhal ah ayaa jirta iyo waxa xamaasadda leh ee qof waliba iibsado, waxay la mid tahay "antivirus"> :(
Akhristayaasha sawirka faraha ee mashiinka (anigaa leh) waa wadar kale oo BULLSHIT ah, sidaa darteed waxaan rabaa akhristaha sawirka faraha kumbuyuutarkeyga haddii ay dhacdo in mashiinka la xado oo HD-ga uusan qarsoodi ahayn, waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan ayaa ah soo bixi diskiga oo ku xira kombiyuutar kale? BULLSHIT.
Waxa shaqeeya waa inay taxaddar muujiyaan, wax intaa ka badanna ma jiraan.
1. Mashiinka maxalliga ah, ku isticmaal passwd ah ugu yaraan 15 xarfaha xarfaha - (aZ10 -. # Etc), anigaa leh 16. Haddii aad si taxaddar leh u doorato, waa wax aan macquul ahayn kuwa adiga ku soo eegaya, isla waqtigaas gel sida aad adigu inta badan u isticmaasho, taas oo ah mid aad u dhaqso badan maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa si aad u xaqiijiso howlaha maamul ee nidaamka, waxaan ku qoray ilbiriqsi.
2. Haddii aan haysanno qalab laga heli karo banaanka LAN-gaaga, ka taxaddar in la cusbooneysiiyey iyo, haddii ay suurtagal tahay, adeegyo ka shaqeeya dekedo aan horay loo sii cayimin.
Maaddaama aad tahay lakab dheeraad ah, dib-u-soo-ceshano mid kasta oo ka mid ah adeegyadan aan adeegsanno, kana saar xargaha lagu aqoonsan karo nmap iyo wixii la mid ah.
3. Qarsoodi warbaahinta kaydinta ee aan isticmaalno.
4. Furaha sirta ah ee shabaqa ku yaal, adeegso adeegyada sida LastPass oo soo saara furaha sirta ah ee 20 xaraf xarfaha alifiya kuna kaydi hab qarsoodi ah si aan loo geli karin haddii aadan haysan furaha sayidka.
5. Haddii shabakad la hoos dhigayo si ay ula wadaagaan isticmaaleyaasha kala duwan, kuma filna in la isticmaalo siyaasadaha adeegsiga saafiga ah ee cinwaanada IP-da, waa lagama maarmaan in la isticmaalo VLANs HAA AMA HAA.
6. Marka laga hadlayo amniga isku xirka, waxa ugu yar ee lagama maarmaanka ahi waa inaad yeelato aqoon buuxda iyo maarayn ku saabsan qaabka OSI iyo 7 lakab, haddii kale xitaa ma bilaabi kartid inaad hadasho.
7. Qalabka mobilada, arrinta amniga ayaa ka dhib badan, halkaasna akhristaha faro ayaa faa'iido leh.
Taleefoonkeyga casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' waxaan u adeegsadaa qaab aan ku furo maadaama ay wax badan ka waxtar badan tahay galitaanka taxanaha tirooyinka, si kastaba ha noqotee qof si dhexdhexaad ah u soo jeeda ayaa si fudud u garan kara in isagoo eegaya shaashadda muuqaalka ee ka soo horjeedda iftiinka ay ogaan karaan qaabka ku saleysan calaamadaha dufanka leh ee ka tagay faraheyga.
Halganka u dhexeeya amniga iyo adeegsiga ayaa ah mid joogto ah, waa inaad ka feejignaataa daciifnimada oo aad go'aansataa haddii aan door bidno inay ahaato mid raaxo leh ama badbaado leh, inta soo hartay waa daandaansi saafi ah.
OpenSSH ama Windows, taasi waa su'aasha.
* BSD xD
Waxaan ka fekerayay sida ay ufiican tahay SSH iyo sida xisaabinta maanta aysan ficil ahaan ujirin qalabkan la'aantiis.
Xaqiiqda ah in qoraaga maqaalku yahay fanboy sinnaba ugama dhimayso soo jeedintiisa, maadaama ay tixraacayaan arrimo aad uga fog OS-ka aan isticmaalno, iyo HAA, waa run inay ku heleen koontadooda sababo la xiriira xaasidnimo xumo khalad Apple, sida aad soo jeedisay, laakiin; Miyaad gebi ahaanba hubtaa in bixiyaha adeegga emailkaagu uusan sameyn doonin qalad isku mid ah?
Marka laga hadlayo waxaad soo jeedineyso ee ku saabsan isticmaalka ereyga hacker, sida ku cad Wikipedia, 'Waqtigan xaadirka ah waxaa loo adeegsadaa qaab caadi ah oo badanaa loogu gudbiyo dambiilayaasha kombuyuutarka', iyadoon loo eegin farsamada loo adeegsaday dambiga, run ahaantii, kuwa ugu caansan (ama mid ka mid ah kuwa ugu caansan) Hackers taariikhda, Kevin Mitnick, wuxuu si ballaaran u adeegsaday farsamooyinkan injineernimada bulshada si uu u helo xogta shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha, sida lagu sharaxay buugaagta uu daabacay.
Dhinaca kale, si looga fogaado taas kaliya adoo ka saaraya darawalka adag kombiyuutarka inay marin u heli karaan xogtaada, waxaa jira aalado badan oo u oggolaanaya duubista feylasha, faylalka, qeeybinta iyo xitaa diskiga oo dhan, waxa dhacaya waa inaanan sameyn u isticmaal, mar dambe ama aqoon darri ama caajis darteed, sidaa darteed iska ilaali in khalkhal gelinta amniga ay tahay mid annaga noo taal.
Hadda, dhammaan tallaabooyinka amniga ee aad soo jeediso waa kuwo ansax ah laakiin nasiibdarro ma khuseeyaan marka aan adeegsanno adeegyada shabakadda ay bixiyaan dhinacyada saddexaad, sida xisaabaadka emaylka, koontooyinka bangiga, iwm, illaa amniga farsamooyinka xaqiijinta iyo xaqiijinta xaaladaha noocan ah waxay kuxiranyihiin adeeg bixiyaha, kuma xirna annaga.
Sikastaba, aad baad ugu mahadsantahay faallooyinkaaga, waxay had iyo jeer ka caawiyaan cadeynta fikradaha.
Qofkii raba asturnaan, yaa aadaya inuu ku noolaado dhul ka mid ah badda dhexdeeda. Waqtigaan la joogo waa sidaad ku tiraahdid faallo kale, asturnaanta waa chimera, utopia.
Marka laga hadlayo shabakadda (laga yaabee) in yar oo amni ah waxaan u baahanahay inaan leenahay adeege u gaar ah oo aanan ku xirneyn adeegyada dhinac saddexaad sida Gmail, Facebook iyo kuwa kale, maxaa yeelay cidna kama saareyso inay iibinayaan macluumaadka iyo macluumaadka. ilaa qandaraaslaha ugu sareeya ..
Hagaag, taasi, dalool fur oo gudaha gal ciddii aan doonayn in sirtooda lagu xadgudbo…. upss, eraygu mar hore ayuu iiga tegey qaamuuska XDDD
Waa in xilli kasta uu leeyahay caqabado iyo khataraha la xiriira, xilligii godadka, khatarta waxay ahayd inuu cuno bahal, maanta waxaan noqon karnaa dhibanayaal shil gaari, laakiin waxa ay ku saabsan tahay maahan inaan u istaagno bannaanka u bax, haddii aanad fahmin khataraha oo aad samayso wax kasta oo suurtagal ah si looga fogaado kuwa laga fogaan karo; HAA, nasiib daro ma jiro wax qarsoodi ah, xitaa haddii aan aadno jasiirad ku taal badda dhexdeeda, maxaa yeelay dayax gacmeedka p *** Google Earth ayaa maraya oo sawir naga qaadaya markaan qaawannahay xeebta ...
JAJAJAJAJAJAJA .. Waa inaan bilaabaa adeegsiga Google Earth oo aan helaa qasriga PlayBoy .. laga yaabee wax fiican inaan qaato xDDD
Hubi tan: http://www.youtube.com/watch?v=pLrL1Yg20rA
Laakiin @Charlie, qeexitaanka WP ee hacker waa tabloid iyo runti nacas ah erayga, waad ku mahadsantahay qiimeyntiisa maxaa yeelay waan sixi doonaa, sida iska cad qofka qoray maqaalkaas sifiican looma oga ama waa eex wuxuuna raadinayaa inuu qalloociyo iyo sumcad xumada.
Si aad u yar ama ka yar, dhammaanteen waxaan nahay haakaris. Jabsigu wuxuu si fudud u helayaa habab kala duwan oo loo isticmaalo isla waxyaalahan sidoo kale helitaanka nuglaanta nidaamka, nidaam kasta, ha noqdo software, xisaab xisaabeed, galitaanka dacwad ... taasi waa hufan oo run ah, inta kale, I ku celi: waa tabloid tabloid ah oo aan aqoon waxa ay ka hadlayso U waxay ku shaqeysaa iyada oo si khaldan loo sheego sida ay qabaan kooxo gaar ah - iyo kordhinta dhammaan kuwa iibsada qeexitaankaas HACKING.
Jabsigu waa fiican yahay! Waan hubaa inaad waqti badan ku qaadan doontid jabsiga kombuyutarka intaad ogtahay!
Haa, haa, haddii aan helno wax fiican waxaan bilaabeynaa inaan kala soocno khawanka dildilaaca, iwm, iwm, iwm., Waxa dhacaya ayaa ah maqnaanshaha erey kale oo wanaagsan oo la wada yaqaan, waa inaan soo saarnaa mid, maxaa yeelay waxaan dhigeynaa qof dambi iyadoo la adeegsanayo aaladaha kombuyuutarka »dhawaq xoogaa abuur ah, sax?
Haa, waan kugu raacsanahay, jabsashada sidoo kale way fiicnaan kartaa, inuu jiro koodh hacker ee anshaxa wareegaya kaas oo si aad u cad u caddaynaya. Waxay u dhacdaa sida sayniska iyo teknolojiyadda guud ahaan, oo iyagu iyagu aan fiicnayn ama xun, haddii aysan ahayn sababta oo ah sida dadka ama dawladuhu u adeegsadaan.
Xaaladdan gaarka ah anigu kama 'fiicneyn', waxyaabaha waa in lagu magacaabaa magacooda maxaa yeelay tan kaliya ayaa farqiga u leh marka aan dhahno wax waxaan ula jeednaa si sax ah mana ahan wax la mid ah; Dadka intiisa badani maanta xitaa way adag tahay xitaa inay wax akhriyaan haddii ay sameeyaanna waa mid aad u xaddidan oo aan ficil ahaan lahayn eray bixin taasna waa mid ka mid ah dhibaatooyinka sababta maskaxdooda yar ay u heli waayaan sida ay u muujiyaan waxa ay rabaan inay sheegaan oo ay ku dambeeyaan hoos u dhigista, dhalanrog iyo luqad burburin.
Markaan burburinana luqadda waxaan baabi'inaa qaabkeena fikirka, oo ah ereyo, maxaa yeelay bini'aadamku wuxuu ku fikiraa isagoo adeegsanaya fikradaha oo aan isna ku kasbanayno adeegsiga ereyada sidaas darteedna, ereyada aan yareyn ee aan haysanno, ayaa inbadan naga sii xumaanaya, way fududahay sidaas .
Sidoo kale, noqoshada "fiican" waa mudnaan, wanaag (waana ku faraxsanahay waana ku faraxsanahay), waa qayb kale oo ka mid ah dariiqa wanaagga tan iyo markii wanaaggu raadinayo heer sare waxyaabaha:
adj. Hal abuurnimo aan caadi ahayn, qurux ama dhadhan
fiican adj [ekski'sito, -ta] oo ah dhadhan aan caadi ahayn oo tayo sare leh
Ka soo horjeedka ayaa ah inuu noqdo mid foolxun, dhexdhexaad ah, eeg Tinelli, Rial, Fort, Jersey Shore iyo kuwa kale>: D
Jabsaduhu waa nooc ka mid ah dadka, jabsadaha waa nooc kale oo shaqsi ah, jabsadaha wuxuu u dhaqmi karaa sidii jaajuus haddii uu doono, laakiin ma ahan waxa isaga xiisaynaya, jabsiga waxaa ku sasabaya dhibaatooyin macquul ah oo ay tahay inaad ku sababeyso hel soo celinta saxda ah. Hackers-ku waa abuure, riyoonaya, qof avant-garde ah, jabsadaha ayaa ka faa'iideysta aqoontaas, inta badan isaga oo aan fahmin guud ahaan inuu dambiyo sameeyo.
Hackers-ka caadiga ah waa aflagaado in isaga loogu khaldamo jaajuus ahaan.
Haa, waan ku faraxsanahay, in kastoo aanan ku jirin kiiskan, halkan kaliya waxaan ku isticmaalaa ereyada saxda ah.
"Waxa dhaca waa iyadoo maqnaanshaha erey wanaagsan oo dadku wada yaqaan,"
Ereygu ma maqna oo weligiis waa la yaqaanay waana Cracker, uma baahnid inaad wax abuurto.
Sidii aan horey kuugu sharraxay, saxaafadda ay ceyriyeen danaha dhinacyada saddexaad (dawladaha / faaf-reebka iyo hay'adaha cabudhinta / warshadaha) waxay mas'uul ka ahaayeen jinni-gelinta tuugada iyo ku rididda qof kasta bushimahiisa sidii wax la mid ah argagixiso wax qarxisay ama gacan ku dhiigle taxane ah. markay HELI KARAAN, HAA AY RABEEN, inay adeegsadaan erayga 'cracker' una calaamadeeyaan kala soocida maadama haakarisku runti yahay aaladda horumarka bulshada, ka dib intaas oo dhami waa howsha barbaarinta ee gobolka, ee maahan tayda, waxaan u huray naftayda waxyaabo kale.
"Jabsiga Anshaxa" waa shaqo ka fadhiisasho aan ku faraxsaneyn oo leh asal toos ah markii aan ogaanno sida mowduucu u dhashay.
Facho sida Mareykanka oo kale, masuulka ugu weyn ee faafinaya khayaanada iyo cadowga markay u tahay tuugada ama jabinta ilkahiisa dal ku saleysan jasiirad yar oo leh geesinimo inuu lugaha ku istaago oo u sheego MOMTA! (ama daqiiqad ah!)
dal ku dhisan jasiirad yar oo geesinimo leh oo cagihiisa istaagta oo dhahda MOMENTITO!
Hadaad u jeeddo Cuba, waxaa habboon inaadan u galin mawduucaas 😉
Waan jeclahay tan! ... waa run in wada hadal kasta oo soconaya muddo ku filan, iyadoo aan loo eegin mowduuca laga hadlayo, uu aakhirka horseedayo isbarbardhigga fashiistaha (facho, sidaad sheegto) iyo xilligan, waan ka gaabsanayaa inaan sii wado , iyo waxyaabo kale, maxaa yeelay waxaan ku noolahay "jasiiradda yar" ee aad sheegtay iyo in badan oo kaliya ay u yaqaanaan tixraac oo ay tusaale u soo qaataan wixii ku habboon mid kasta.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo joojinta.
By the way ... anaga oo ah aqoon yahan wanaagsan oo ah afkeena iyo qof 'fiican', waa inaad ogaataa in waxa saxda ah la 'dejin doono' oo aan ahayn 'lahjad »... 😉
haa, aad ayey u xun tahay inaad ka fogaato oo aan kuu iibsan karin biir wanaagsan (Maximator, Hoeegarden, Guiness, dooran!)
Maalin maalmaha ka mid ah waxaan jeclaan lahaa inaan si qoto dheer uga hadalno mowduuca, waxbadan ayaan ogahay in kasta oo aysan waligeed isku mid ahayn in laga arko banaanka halkii aan ku noolaan lahaa.
@Charlie: waad kuheysaa gudaha.
Markaad timaaddo Cuba ha iloobin inaad horey wax u qorto, inay fiicnaan laheyd inaad fariisato oo aad yeelato wax yar oo biir ah oo kaftan yar a
Waan ka helay maqaalka.
Waxaan u maleynayaa in xilligan aan ku dul saarnay hal "comma" Net-ka, mar horaba waa nala basaasay oo iyada oo taas la marayo ayaa fikrad laga sameeyay dhadhankeena, daciifnimadayada, ceebahayaga, iwm. Waxaas oo dhami waxay horseedayaan suuqyo gaar ah ama daraasado suuqgeyn ah oo loo adeegsado. . wanaagsan? Khaldan? .... Ma jiraa qof og tan?
Waxaa laga yaabaa in waxaas oo dhan ay ka maqan yihiin marka la eego qodobka aan soo sheegnay.
Ku jawaab Kikilovem
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka heshay qoraalka waxaanan kugu raacsanahay in si joogto ah naloo basaaso, xitaa adigoon marin shabakada, hadaad ka shakiso, banaanka u soo bax oo arag inta kamaradood ee "amniga" ah ee nala daawanaya, adiguna waxaad tahay sax in Waxba mawduucan uusan ka muuqan maqaalka, laga yaabee in mustaqbalka aan wax ka qoro, laakiin tani markii horaba waxay ahayd billet wanaagsan oo waxaan doorbiday inaan ku ekaado mowduuca laga hadlayo.
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada iyo joojintaada.
Dhamaan magaalooyinka miyiga ah ee ku hareeraysan magaalada aan ku noolahay, ma jiraan kamarado kuwaas sidoo kale?
Wax fikrad ah kama haysto sida ay tahay magaalada aad ku nooshahay, laakiin ugu yaraan, magaaladayda, meesha ay tahay sababta oo ah ma haysanno xitaa ma heli karno internetka, iskaba daa waxyaabo kale oo badan, kaamirooyinka si aad noola kormeerto HAA aan hayno, iyo in yar oo ka mid ah ...
Caqli ahaan, brotha weyn wuxuu ka bilaabmaa USA iyo Yurub.
Habka ugu fiican ee mawduuca loogu dhigo wadahadal, laakiin, asturnaanta, shabakadda ama internetka, ma aaminsani, xitaa hadda oo aan ahay isticmaale GNU / Linux, iyo wax ka yar markii aan isticmaalayay Windows; Iyadoo la adeegsanayo erey sir ah ama biometrics ah macno malahan anigu ma aaminsani in tan asturnaanta; Ka waran haddii ay wax caawin lahayd, waxaa laga yaabaa inay noqon lahayd in la ogaado waxa koodhka ilaha uu ka dambeeyo bey'adaha garaafyada ama amarrada deegaanka qadka amarka ah (Waxaan u maleynayaa in taasi ay tahay sababta mararka qaar aan ugu fiirsaday qormooyinka mareegaha qaarkood cod gaar ah ku jees jees ku saabsan erayga GNU "dhowr wildebeest in the see", dadka caadiga ahi ma yaqaaniin waxa barnaamij barnaamij ahi yahay).
Aad ayaan uga xumahay in laygu qasbo, tusaale ahaan, in aan yeesho xisaab X ah adeeg X ah (facenoseque, twetnoseque ama meel kale oo ereyada sirta ah sidoo kale la adeegsado) si aan ugu dhaqmo xaquuqda dimoqraadiyeed ee loo maleynayo in si xor ah loogu muujiyo fikradaha ama fikradaha iyo; Xaqiiqdii, waxay si aad ah iiga dhibaysaa faquuqida naloo geysto marka qaar ka mid ah bogagga internetka ee X aysan kuu oggolaan doonin inaad aragto macluumaadka ay bixiyaan haddii aadan haysan isticmaale ka tirsan adeegyada X oo xarriiqyo xusaya.
Waxaan u arkaa maadada inay tahay mid aad u sharaxan oo faa'iido leh, waad ku mahadsantahay wadaagidaada.
PeaZip 4.8 Waa Laheli karaa
Maaddaama Linux aysan ku guuleysan abaalmarinta Blogs :(